Păuleşti, Județul Hunedoara, i-Romania
I-indlu eyakhiwe ngamapulangwe ephelele ibungazwe ngu-Bogdan
Ikhabethe elithokomele elibuyiselwe phakathi nendawo.
Siwumndeni omncane onabane abebesebenza njengabaqondisi bezivakashi ngaphambi kwalolu bhubhane. Njengoba sasiqaphela ukuthi imisebenzi yethu izoba sengozini isikhathi eside ngenkathi sinquma ukusuka edolobheni siye edolobhaneni elihle nelikude lase-Paulesti, e-Bulzestii de Sus esifundeni sase-Hunedoara, indawo okwakuhlala kuyo ugogo nomkhulu ka-Bogdan.
Kunezindlu ezi-2 kule ndawo. Kwenye yazo yithi esihlalayo futhi indlu yesibili kwakuyindlu yokuqala yomndeni engaphezu kweminyaka engama-200 ubudala. Lapho sifika lapha umuzi omdala wawuyincithakalo uphahla lubhidlikile. Sanquma ngokushesha ukulakha kabusha. Okubonayo namuhla kuyinhlanganisela yezinto ezindala nezintsha. Siyakhe kabusha ngendlela ehlukile, encane futhi yaba yinde kodwa sagcina izinto zokwakha eziningi ngendlela esingakhona ngayo.
Iphansi lamapulangwe kanye nezindonga kuneminyaka engaphezu kuka-200 ubudala kuyilapho zonke ezinye izinto zokwakha zitholakala endaweni.
Iqhugwane lethu lezinkuni lisanda kulungiswa futhi lilungele umbhangqwana noma umndeni omncane. Kunendawo evulekile ezansi nesitofu sezinkuni esivuthayo, indawo yekhishi elincane nendawo yokulala ingaphezulu. Kukhona nendlu yokugezela encane kanye nevulandi elingaphandle ukuze ujabulele umbono omuhle futhi uthathe ukuthula nokucula kwezinyoni.
UBogdan Ungumbungazi ovelele